बागी उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने काँग्रेस घोषणा, को को परे सुचीमा ?
ARCHIVE, POLITICS » बागी उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने काँग्रेस घोषणा, को को परे सुचीमा ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उठ्ने बागी उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बुधबार एक विज्ञप्ति निकालेर यही असार १४ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उठ्नेलाई कारबाही गर्ने जनाएको हो ।
कांग्रेसले पार्टीको विधान २०१७ (संशोधित र परिमार्जित) को धारा ४९ (११) (ख) अनुसार पार्टीबाट स्वतः निष्कासित गर्ने जनाएको छ । अहिलेसम्म धनगढीमा २ जनाले बागि उम्मेदवारी घाेषणा गरेका छन ।